वसन्तकुमार नेम्वाङः युवा सांसददेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसम्म « Mechipost.com
वसन्तकुमार नेम्वाङः युवा सांसददेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसम्म
प्रकाशित मिति: ५ मंसिर २०७६, बिहीबार ०९:२५
फिदिम, ५ मंसिर
पाँचथरबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य वसन्तकुमार नेम्वाङ संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मौजुदा मन्त्रीमण्डलमा फेरबदल गर्नुभएको हो । जसअनुशार सांसद् नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको हो ।
उक्त मन्त्री पदमा यसअघिसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य रघुवीर महासेठ हुनुहुन्थ्यो । सांसद् नेम्वाङले महत्वपूर्ण पार्टी जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीलाई विस्थापन गर्ने मौका पाउनुभएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सफतग्रहण आजै विहान ११ बजे राष्ट्रपतिको कार्यालयमा हुने भएको छ ।
काठमाण्डौँमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चा चलिरहेका बेला पनि सांसद् नेम्वाङ भने पाँचथरमा उपनिर्वाचनको प्रचारमै ब्यस्त हुनुहुन्थ्यो । निर्वाचनका कुशल रणनीतिकार नेम्वाङ स्वयंकै वडा फिदिम नगरपालिका वडा नं. १ को वडाध्यक्ष पदमा समेत आगामी मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । नेम्वाङ राती नै विराटनगर पुग्नुभएको छ ।
वि.स. २०१८ चैत्र ८ गते फिदिममा बुवा देवीप्रसााद नेम्बाङ र आमा विष्णुमाया नेम्बाङको माइलो छोराको रुपमा उहाँको जन्म भएको हो । उहाँका चार दाजुभाई र तीन दिदीबहिनी हुनुहुन्छ ।
विद्यार्थी जीवनमा नेम्वाङ साँस्कृतिक, सांगीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन औधि रुची राख्नुहुन्थ्यो । यीनै कार्यक्रममा सहभागी हुँदाहुँदै उहाँ जनवादी गीत गाँउन थाल्नुभयो । उहाँमा कम्युनिष्ट पार्टीतर्फ झुकाब बढ्दै गयो । यही बेला नै उहाँ अनेरास्ववियूमा संगठित हुनुभयो ।
नेम्वाङले फिदिम माध्यमिक विद्यालयबाट २०३५ सालमा एसएलसी उत्तिर्ण गर्नुभएको थियो । नेपाल ल क्याम्पस काठमाण्डौँबाट बीएल उत्तिर्ण उहाँ २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो । पञ्चायतकालमै बीएल उत्तिर्ण उहाँले वकालतका लागि कानून ब्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएर केही समय वकालत पनि गर्नुभयो ।
तर उक्त पेशाबाट मुलुकको परिवर्तन सम्भव नदेखेपछि उहाँ कम्युनिष्ट आन्दोलनको पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन्नुभएको थियो । उहाँले २०४७ पुष १७ गते पार्टीको संगठित सदस्य प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
चार दशक लामो राजनीतिक यात्रामा नेम्वाङ प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष, तत्कालीन नेकपा (एमाले)को जिल्ला कमिटी सदस्य, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य, केन्द्रीय उर्जा विभाग सचिव लगायत जिम्मेवारीमा पुग्नुभयो । केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेम्वाङले प्रधानमन्त्री प्रशासनिक सल्लाहकारको भूमिका समेत खेल्नुभएको थियो ।
गणतन्त्रअघि नेम्वाङले पाँचथरमा तीन पटक चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो । उहाँ २०४८ सालमा ३० वर्ष उमेर नपुग्दै पाँचथर क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा उहाँ झिनो मतान्तरले पराजित हुनुभयो । तर २०५६ मा पुनः विजय हाँसिल गर्नुभयो । उहाँ विजयी हुनुभएको दुवै पटक नेपाली काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेकाले उहाँ मन्त्री बन्न पाउनुभएन् । यसपछि उहाँ पुनस्र्थापित संसद्को सदस्य हुनुभयो ।
गणतन्त्रपछि उहाँले निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुभएन् । तत्कालीन नेकपा (एमाले)बाट संविधानसभाका दुवै निर्वाचनमा पाँचथर क्षेत्र नं. १ बाट गणेशकुमार काम्बाङलाई उहाँकै अगुवाई अघि सारिएको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित काम्बाङले दोश्रो संविधानसभामा विजय हाँसिल गर्नुभयो ।
संविधान जारी भई मुलुक संघीय ब्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै नेम्वाङले सिङ्गो पाँचथर जिल्लाको प्रतिनिधिको रुपमा संघीय संसद्मा पुग्ने मौका पाउनुभयो । पाँचथरवासीले प्रतिद्वन्द्वीभन्दा उहाँलाई १२ हजार भन्दा बढी मत प्रदान गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनेका थिए ।
तेश्रो पटक सांसद् बन्नुभएका नेम्वाङ मन्त्री बन्ने जिल्लावासीको अपेक्षा थियो । यसअघि नै मन्त्री बन्ने सूचिमा नाम भएपनि उहाँले अहिले निकै महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमा जिल्लावासीले उहाँलाई बधाई दिँदै कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिएका छन् ।
छिट्टै घुलमिल हुनसक्ने छवि भएका नेम्वाङ जिल्लामा लोकप्रिय नेता हुनुहुन्छ । जनताका समस्या समाधानमा सधैँ अग्रसर उहाँ कुनै जिम्मेवारीमा नभएपनि जिल्लाको विकासमा निरन्तर अगुवाई गर्दै आउनुभएको छ ।
जिल्लाभर विद्युतिकरणमा नेम्वाङको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ । हालैमात्र तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने निश्चित भएपछि पूर्वमा उहाँको भूमिका अझै बढेको छ । नेम्वाङ पूर्वी पहाडका नेताहरु सम्मिलित तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको सरोकार समितिको संयोजक समेत हुनुहुन्छ ।